एउटा सहरी नक्सलको बयान – www.janabato.com
एउटा सहरी नक्सलको बयान
१८ आश्विन २०७५, बिहीबार ११:४० October 4, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
सत्य र इमानदारीका साथ लगेका शब्द गोली र गालीभन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छन्, आज यो कुरा फेरि प्रमाणित भइरहेको छ । हाम्रा गीत र कविताहरूमा जोश छ तथा हाम्रो काम र लेखनीको आधारभूमि तर्क र तथ्य हो । मेरा सबै साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीहरू सबै आफ्नो संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई लागू गर्नका लागि र हरप्रकारका शोषण उत्पीडनको विरोध गर्नका लागि हरेक प्रकारले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने काम जारी राख्नुस् ।
ती सबै साथीहरू र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले आफ्नो अद्वितीय निर्णय सार्वजनिक गर्नुभयो । उनीहरूका कारण हामीले यो मामिलामा राहत पत्ता लगाउन चार हप्ताको समय पायौँ । जनताको हकका लागि आवाज उठाउने सबै नागरिक र हाम्रो तर्फबाट बहादुरीकासाथ लडाइँ लडेका भारतका ती अधिवक्ताहरूका सम्झनालाई मैले सँगालेर राखेको छु । म अभिभूत छु, त्यस एकजुटताका लागि जुन सिमानाको पर्खाल नाघ्दै हाम्रो समर्थनमा गोलबन्द भयो ।
दिल्ली उच्च अदालतबाट मैले आफ्नो स्वतन्त्रता जितेको हुँ । म यसबाट रोमाञ्चित भएको महशुस गर्दैछु । मेरा सबैभन्दा प्रिय साथी र वकिलहरू जसको सानिध्यतामा कानुन र ‘लजिस्टिक टिम’का सबै साथीहरू अनि नित्या रामकृष्णन, वारिसा फरासत, आश्वस्त गर्दै थिए । उनीहरूले मेरो स्वतन्त्रताका लागि अक्षरशः धरती र आकाश एक गरिदिए । मलाई थाहा छैन, म ती साथीहरू र ती अधिवक्ताहरू जसले उच्च अदालतमा हाम्रो पक्षमा दलिल दिए, कहिलै यो ऋण तिर्न सक्छु होला । यावत अवरोध हुँदाहुँदै पनि नजरबन्दको यस अवसरलाई मैले सही ढङ्गले प्रयोग गरेँ । यसमा मलाई कुनै गुनासो छैन ।
फेरि पनि आफ्ना सहअभियुक्तहरूलाई र ती हजारौँको सङ्ख्यामा जेलमा बन्द राजनीतिक बन्दीहरूलाई भुल्न सक्दिनँ । जसलाई उनीहरूको वैचारिक प्रतिबद्धताहरूका कारण यी झुठा आरोपको सहाराले ‘गैरकानुनी गतिविधि निरोधक कानुन’ (यूपीए) अन्तर्गत जेलहरूमा कैद गरेर राखिएको छ । यस्तै प्रकरणमा आरोपी बन्दीहरू जेलभित्र भैरहेको अमानवीय व्यवहारका विरुद्ध भोक हड्तालमा बसेका छन् र उनीहरूलाई राजनीतिक बन्दीको व्यवहार गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । अन्य राजनीतिक बन्दीहरूले पनि समय–समयमा भोक हड्तालको सहारा लिएका छन् र यही माग गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूको स्वतन्त्रता र उनीहरूको अधिकार ‘नागरिक स्वतन्त्रता र जनतान्त्रिक अधिकार’का निम्ति निकै महत्वपूर्ण छ । यसका बाबजुद उल्लास मनाउनुपर्ने कारण छ ।
म एलजीबीटीका कामरेडहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु । उहाँहरूको लामो सङ्घर्षपछि हालै उहाँहरूले एतिहासिक सफलता हासिल गर्नु भएको छ, जसले एउटा यस्तो शानदार सामाजिक आन्दोलनको बाटो खोली दिएको छ । जस्तो बाबासाहेब अम्बेडकरले जाति प्रथाको सफायाका लागि खोल्नुभएको थियो । त्यसैले हामीलाई ‘शिक्षित हुने, सङ्गठित हुने र आन्दोलन गर्ने’ प्रेरणा दिएको दियो । तपाईंहरूसम्म हाम्रो एक्यबद्धता पु¥याउन अलिक ढिला अवश्य भयो तर तपाईंहरूको दृढताले हामी स्वयम्लाई फेरिन बाध्य अवश्य बनायो । तपाईंहरूले हाम्रो मुहारमा फेरि मुस्कान भरिदिनु भयो र हाम्रो जीवनमा इन्द्रेणीको रङ्ग छरिदिनु भयो ।
यसका साथै भीम आर्मीका चन्द्रशेखर रावण उनका साथी सोनु र शिवकुमारको निवारक नजरबन्दबाट स्वतन्त्रत हुने कुराले हामीलाई विशेष रूपमा लामो स्वास लिने अवसर दियो । किनभने यसले हाम्रो समाजमा जड बनेर बसेको जातिवादी अत्याचारका खिलाफ प्रतिरोधी भावको शक्तिलाई निकै इमानदारीसाथ महशुस गराउँछ ।
म जेएनयू छात्र सङ्घका आफ्ना मित्रहरूको संयुक्त बामपन्थी प्यानलले हासिल गरेको एतिहासिक विजयलाई सलाम गर्न चाहन्छु, जसले फेरि एक पटक मिलेर प्रतिरोध गर्नुपर्ने वर्तमान समयको आवश्यकतालाई प्रमाणित गरिदियो । यसैगरी नै हामीले कुनै पनि उत्पीडनको सामना र प्रतिरोध गर्न सक्छौँ र यसका लागि बलियो जनसमर्थन जुटाउन सक्छौँ ।
साथीहरू ! सत्य र इमानदारीका साथ लगेका शब्द गोली र गालीभन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छन्, आज यो कुरा फेरि प्रमाणित भइरहेको छ । हाम्रा गीत र कविताहरूमा जोश छ तथा हाम्रो काम र लेखनीको आधारभूमि तर्क र तथ्य हो । मेरा सबै साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीहरू सबै आफ्नो संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई लागू गर्नका लागि र हरप्रकारका शोषण उत्पीडनको विरोध गर्नका लागि हरेक प्रकारले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने काम जारी राख्नुस् ।
एक पटक फेरि पासका यी अनमोल शब्द स्मरण गर्नुस–
‘हम लड़ेंगे साथी
कि अभी तक लड़े क्यों नहीं
अपनी सजा कबुलने के लिए
हम लड़ेंगे साथी ।’
← ‘धर्म र भगवान’वारे आइन्स्टाइनको चिठी
अतिक्रमित भुभाग सुस्तामा एसएसबीद्वारा दुव्र्यवहार →
९ माघ २०७४, मंगलवार ०६:४६ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on सडक दुर्घटनामा ८ वर्षमा १६ हजारको मृत्यु
भुसाल र भट्टराईको ‘नोट अफ डिसेन्ट’, एमालेभित्र तीव्र असन्तुष्टि
१० माघ २०७४, बुधबार ०५:२५ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on भुसाल र भट्टराईको ‘नोट अफ डिसेन्ट’, एमालेभित्र तीव्र असन्तुष्टि
इजिप्टलाई ३–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै रसिया बिजयी
६ असार २०७५, बुधबार ०२:११ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on इजिप्टलाई ३–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै रसिया बिजयी